Iimveliso eziyimfuneko zokuthwala kwingxowa yakho yokuhamba | Amadoda aQinisekileyo
Ngaba uza ku zeholide kwaye sele ucingile malunga nokufaka kwisingxobo sezinto zokuhlamba? Ke ukuba akukho nto ilibalekileyo, eyona nto ilula kukwenza uluhlu. Masibone ezinye zeemveliso eziyimfuneko ekuya kufuneka ubenazo xa ushiya uhambo.
Ibhegi yangasese yinxalenye yezinto ekuya kufuneka ukuba wonke umntu ozihoyileyo azibeke ibhegi. Kodwa okokuqala, kufanelekile ukwazi ukuba yeyiphi imveliso ekufuneka igcinwe rhoqo kukhathalelo kwaye Ucoceko siqu
Ukwenza ibhegi yokuhamba kufuneka ubandakanye iimveliso kubalulekile uyakuqiniseka ukuba ziya kusetyenziswa: ibhrashi yamazinyo, Intlama yamazinyo, i-blade blade, isikhonkwane seenzipho, a qhumiso, isisiphunga, kwaye unonophelo oluthile izinto zokuthambisa.
Ukuze ungagcwalisi ingxowa yangasese ngeetyhubhu ezingapheliyo kunye neengqayi zekrimu zazo zonke iintlobo, eyona nto ifanelekileyo kukuba ukhethe 2 kwiimveliso ezi-1. Umzekelo, unokukhetha into yokucoca ubuso nayo ukukhuhla, kunye nolwelo lokuhambisa amanzi oluthi kwangaxeshanye lukhule, ijeli yomzimba neenwele ngaxeshanye, a utsheva amagwebu anti-ukudinwa, okanye ikrimu eyondla iinwele ngelixa ukhonza njengejeli yokuthambisa. Ukuba ucwangcisa ukuya elangeni, ungalibali ukubeka elungileyo umkhuseli, ngokukhethekileyo oko kukumelana namanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iimveliso eziyimfuneko zokuthwala ibhegi yakho yokuhamba
Suit with sneakers: sikunika izitshixo zokunxiba
Ifashoni yenani eliprintiweyo lezikipha